Yeey Dani Ugu Jirtaa Nidaamka Axsaabta Badan Ee Laga Hirgelinayo Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Yeey Dani Ugu Jirtaa Nidaamka Axsaabta Badan Ee Laga Hirgelinayo Puntland
April 15, 2012 - By: Moha Salat
Marka hore mahad idilkeed waxaa iska leh Allaah, naxariis iyo nabadgelyana Rasuulkeenii ayeey korkiisa ahaatay. Kadib dhammaan akhristayaasha sharafta iyo qadarinta mudanoow iga gudooma salaanta islaamka ah ee ACWW.
Tan iyo markii Puntland la asaasay 1998dii waxaa ka jiray nidaam in baddan lagu soo dhaqmayey oo ah xubno ku yimaada nidaam beeleed oo ah tiro 66 kuwaas oo doorta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkaba. Intii muddo ah waa leyska ladnaa oo waa lagu soo meel gaaray. Runtii waqtiga dhow waxa ay aheyd nidaam lagu meel gaari karo. Laakiin maaha nidaam ay cadaaladi ku dhisan tahay ama maba ah qaab ama nidaam ay bulsho higsaneysaa horumar ay ku sii taagnaan karto. Maamuladii Puntland isaga danbeeyay wey kawada dhawaajin jireen in qaabkan laga gudbo oo loo gudbo nidaamka axsaabta. Laakiin midna uma suuroobin sababo jira awadeed.
Nasiib wanaag maamulkan hadda jira ayaa isku taxluujiyey bal in uu bulshada reer Puntland uu ka saaro nidaamkan oo looga gudbo nidaamka axsaabta. Illaa xad hamigoodii waa lagu taagan yahay oo waxaa maanta loo fadhiyaa sidi loo ansixin lahaa marka hore dastuurka kadibna loo furi lahaa xisbiyadda isa soo bandhigaya. Maamulkan wax baddan buu ka qabtay sidi hadafkaas loo gaari lahaa, oo wuxuu markiiba xooga saaray sidi loo dhameystiri lahaa dastuurkii muddada qabyada ahaa, kadibna golihii wasiirada iyo baarlamaankaba ay ansixiyaeen, imminkana laga sugayo in ergada ka kala imaanaysaa Puntland oo dhan ay ansixiyaan. Waxaa kaloo la dhisay guddigii doorashooyinka.
Marka xisbiyo la sameysto waxaa laga gudbayaa nidaamka qaabka daran ee qabaliyadda oo Xisbigu macno yeelan mayo hadduusan shacbiyad ku laheyn magaalo walboo Puntland ah. Haddaba si uu Xisbigu u iibiyo barnaamijkiisa siyaasadeed waa inuu wataa dadka reer Puntland meel walboo ay joogaanba. Marna ma dhaceyso xisbi ku koobnaanaya magaalo kaliya ama qabiil qura. Waxaa la arkaya labo wada dhalatay oo kala xisbi ah ama labo is dhashay oo labo xisbi ku kala jira. Waxaa xitaa mar marka qaar dhaceysa labo isu dhaxda sida nin iyo xaaskiisa oo labo xisbi ku kala jira. Runtii waa tillabo horey loo qaadayo dhanka horumarka oo u baahan in la taageero.
Haddaba shaqsiyaad wata dano gaar ah oo aan marna u daneynayn ummadda reer Puntland oo doonaya in circle kaas ama qaabkaas foosha xun ummaddu in ay isaga jiraan, ayaa ummadda ku mashquulinya sanad baa la kororsaday iyo fulaan wuxuu doonayaa in uu iska sii joogo. Haddaba waxaa isweydiin ah middee ayaa kuu fudud adiga in aad uga gudubto nidaamka taqliidiga ah ee asaageen naga reebay muddo yar gudahooda oo aad u gudbto nidaamka axsaabta iyo in aad 4 sano ama shan sano oo danbe ay ku hor fadhiyaan baarlamaankii 66da ee ku yimid nidaamka aan cilmiga iyo aqoonta ku dhisnayn. Jawaabtu wey caddahay oo waa waxaa noo haboon waqtigaba ha dheeraadee in mar uun laga gudbo nidaamkaas taqliidiga ah ee asaageen naga reebay. Tusaale waxaa kuugu filan nimankan walaalaheena ee aan dariska nahay Somaliland iyo halka ay joogaan maanta.
Haddaba waxaan hadalkeyga ku soo gabagabeynayaa war aynu eegno mustaqbalka fog iyo waxa ay danteen ku jirto, ee yaanan eegin u daneynta shaqsi qura oo meel uu noo wado aysan jirin. Isku day in aad u fakarto nidaam horumarsan ee ha ku fekarin hebel qaraabo tihiin iyo isku reer baad tihiin. Ogoow shaqsigu wuu tageyaa laakiin Puntland wey taagnaaneysaa. Maanta waddada aad jeexdo ayeey caruurtaada mari doonaan, ee isku day in aad wanaaga mar walbaa taageerto. Sidoo kale anigoo fursadan ka faa’ideysanayaa ergada ansixinaysaa dastuurka ayaan waxaan oran lahaa, Ogaada maanta waxaad ka talinysaan masiirkii ummadda oo idinkoo Allaah uga baqaya arintaas wax alla wixii wanaaga iyo horumarka oo aan ka hor imaanayn diinteena suuban ee islaamka walaalyaaloow qalinka ku duuga oo ansixiya, wax alla wixii aan danteen ku jirin oo ka horimsaanaya diinteen naga qabta oo ha ansixinina.
NB: – Waxaan kaloo maamulka Madaxweyne Cabdiraxmaan Shiikh Maxamuud ugu hanbalyeeynaya Guriga casriga ah ee Baarlamaanka ee la dhisay lana doonayo in lagu qabto shirka ansixinta dastuurka. Well done waa horumar la taaban karo.
Intaas ayaan Qoraalkeygii kusoo afjarayaa wixii wanaaga ah oo aan qoray waxa ay u sugnaadeen Allaah, wixii qalad ahna waa nafteyda iyo sheydaan.
Cabdixakiim Jaamac Jooje – Social Development Adviser